तलव नपाएको भन्दै क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित « Np Online TV
लामो समयदेखी तलव नपाएको भन्दै बाँकेको खजुरामा रहेको शुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलित कर्मचारीहरुले आफना माग पुरा गर्न अस्पताल प्रशाशनलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम समेत दिएका छन् । एक लोकसेवा आयोग लगायत अन्य प्रक्रियाबाट लिखित परीक्षा मार्फत छनौट भएका कर्मचारीहरुले करीव ४ महिनादेखी तलव र नियुक्ति पत्र नपाएका हुन् ।
अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रविण कुमार गुप्ता, डा. क्रिष्टिना नमोक श्रेष्ठ, डा. उषा शर्मा, रन्जिता ढुंगाना, सन्तोष खनाल, भिमकुमारी तिमील्सेना, देव वहादुर कार्कि, अनिल कुमार यादव, राजेश वर्मा र कृष्ण पौडेलले तलव नपाएको गुनासो गरेका छन । उनिहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती निकालेर सन्चालक समिति र अस्पताल प्रशाशनको ध्यानार्कषण गराएका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले आफ्ना माग पुरा नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन ।